iFixit wuxuu helaa batteri badan iyo adkeysi biyo fiican ee Apple Watch | Wararka IPhone
iFixit wuxuu ka helaa batteri badan iyo adkeysi biyo fiican Apple Watch S2
IFixit way jeceshahay, anaguna waxaan jecel nahay inaad jeceshahay. Waxaan ka hadleynaa jebinta aaladaha leh astaanta tufaaxa. Shalay kooxda iFixit waxay u dhacday inay la shaqeyso Apple Watch Series 2, qalabkii ugu dambeeyay ee la gashan karo ee shirkadda Cupertino ee maanta la iibsan karo. Fowdadan ayaa muujisay qaar ka mid ah warka sheegaya in Apple uusan rabin inuu ku xuso Keynote, sida ku dhacday 3GB ee RAM maalmo ka hor. Aynu jaleecno gudaha Apple Watch Series 2 oo ka socda kooxda iFixit ee khubaro ah.
iFixit waxay horey ugu daabacday boggooda falanqaynta ugu horeysa gudaha Apple Watch Series 2, taasoo markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in batari 273 mAh aan laga fiirsan karin nooca 38mm, kaas oo waxay u maleyneysaa in 33% batari ka badan qaabkii hore (205 Mah). Si kastaba ha noqotee, in kasta oo kororka badan ee batteriga, ka fog wixii aan ku arki karnay kala-guurka mid ka mid ah iPhone-ka illaa kan kale, is-xukunka lama horumarin, ugu yaraan sida laga soo xigtay Apple. Si kastaba ha noqotee, dayactirkan madaxbannaanida xitaa iyada oo leh awood dheeri ah waxaa laga yaabaa inuu ugu wacan yahay GPS isku dhafan oo Apple Watch Series 2 uu leeyahay amaahdiisa.
Sida Apple horeyba uga hadashay, iska caabbinta biyaha waa la hagaajiyay, iyada oo ujeedadu tahay in dadka isticmaala ay sidoo kale u isticmaali karaan inay ku cabiraan layliskooda biyaha. Caabbintaan biyaha waxay kuu oggolaaneysaa inaad ugu dhaadhacdo 50m ugu badnaan soddon daqiiqo. Dhanka kale, iFixit kama helin culeyska cusub ee S2 iyo GPS wali si fiican uma eegin iyagaWaxay si adag u shaqeynayaan si ay u kala furfuraan barnaamijka 'Apple Watch Series 2' si aan ugu raaxeysanno casharradooda dayactirka degdegga ah. Waxba kamaanaan yaabin hagaajinta awoodda batteriga marka la eego iftiinka sare ee shaashadda iyo GPS-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » iFixit wuxuu ka helaa batteri badan iyo adkeysi biyo fiican Apple Watch S2
iFixit wuxuu kala jabiyaa iPhone 7 Plus wuxuuna soo bandhigayaa sirtiisa
Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee Mexico ku yaal ayaa furi doona Sebtember 24